Solar Pump Fekitori, Vatengesi - China Solar Pump Vagadziri
YEMAHARA PRICE FOLDABLE ZVAKO ...
YEMAHARA UNHU SOLAR akatungamirira STRE ...
Gorofu SOLAR Bindu MUDZIMAI
DZIMWE DZUVA PUMPU
30M BRUSHLESS DC SOLAR pombi ...
Kumusoro SOLAR pombi
Inoshandiswa kuwedzera kumanikidza kwemvura. Rega mvura iendeswe kumatunhu akakwirira uye Makuru. Kushanda nesimba rezuva, ndiyo nzira inokwezva yekuwanisa mvura munzvimbo dzakapfuma nezuva, kunyanya munzvimbo dziri kure dzisina magetsi.
INOGONESESA SOLAR PUMPS
Pombi dzinonyudza dzezuva dzinoshandisa simba rezuva kupomba nekutakura mvura. Ipombi inonyikwa mumvura. Iyo ndiyo inokwezva nzira yekupa mvura munzvimbo dzakapfuma nezuva dzepasi nhasi, kunyanya munzvimbo dziri kure dzisina magetsi. Inonyanya kushandiswa kumvura yekumba, kudiridza kwekurima, kudiridza kwegadheni zvichingodaro.
Solar dziva pombi dzinoshandisa simba rezuva kutyaira pombi pombi. Inodiwa neAustralia nedzimwe nzvimbo dzeSunny nzvimbo, kunyanya munzvimbo dziri kure dzisina magetsi. Inonyanya kushandiswa mumvura inotenderera system yemadziva ekushambira uye zvivakwa zvemvura.
ZVAKANAKA ZVAKANAKA PUMPS
Ipombi yakanyikwa mutsime repasi pevhu rekupomba nekutakura mvura. Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba dzemvura, mapurazi ekudiridza uye drainage, emabhizimusi uye emigodhi emakambani, dhorobha mvura yekupa uye drainage.
30M BRUSHLESS DC SOLAR PUMP NEMAHARA YEMAHARA MVURA MVURA ZVINOGONESESA
Zita reBrand: Qingeal pombi
Muenzaniso Nhamba: 4FLP4.0-35-48-400
Nzvimbo Yokutanga: Zhejiang, China (Mainland)
Kushanda: Kunwa mvura kurapwa, Irrigation uye Zvekurima, Machining
Horsepower: 0.5 bhiza simba
Pressure: mukuru kumanikidzwa, High Pressure
4INCH PUMP DIVAI YEMAHARA KUyerera SOLAR PUMPS DC YAKANAKA ZVAKANAKA MVURA POMP
Muenzaniso Nhamba: 4FLD3.4-96-72-1100
Magetsi: 72v, 72v